Valentine Day ကိုသြစတြေးလျရဲ့အများဆုံးရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့၏ 6
သြစတြေးလျ & နယူးဇီလန် သြစတြေးလျ
by စာရာသည် Megginson
ဘရုစ် hood ကို / Getty Images
Valentine Day ကိုအားလုံးသငျသညျအကွောငျးကိုအများဆုံးဂရုမစိုက်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအနည်းငယ်အပိုအရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းအကြောင်း, ဒါကြောင့်ကွာအားလုံးထံမှရသင့်အသက်တာသို့အချို့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းထိုးသွင်းဖို့စီစဉ်ရန်စုံလင်သောအချိန် - ကသာတနင်္ဂနွေအဘို့ရဲ့ပင်လျှင်။
ပျောက်သြစတြေးလျအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Valentine Day ကိုတနင်္ဂနွေရှာဖွေနေသည့်အခါမှရွေးချယ်ဖို့ကမ်းရိုးတန်း, သဘာဝချုံတောနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဟိုတယ်များ, Spa မ်ားနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ၏အဆုံးမဲ့ဆန့်, သငျသညျရှေးခယျြမှုအတှကျအလုယူပါတယ်။
ကြမ်းတမ်းသောကြောင့်စေရန် 1. - ဇိမ်ခံစတိုင် ...
Paperback စခန်း, Jervis ဂလားပင်လယ်အော် , New South Wales
သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောတနင်္ဂနွေကွာရေချိုးပွင့်လင်းသောလေထုရေချိုးခန်း freestanding နဲ့ဇိမ်ခံ "တဲကို" ကိုဆုတ်ခွာရှေ့တော်၌မီးပုံကျော် marshmallows roasting ကပါဝင်ပတ်သက်လျှင်, Jervis ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း Paperback စခန်းသို့သင်ကိုယ်တိုင်စာအုပ်ဆိုင်။ တောင်ဘက်ဆစ်ဒနီဒီ 3-ကြယ်ပွင့်အပန်းဖြေစခန်း, နှစ်ခုသာ-and တစ်နှစ်ခွဲနာရီ, အဆုံးစွန် '' glamping '' အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ bushland နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောမန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များကဝိုင်းရံ, သင်နှင့်သင့်ကိုခစျြတချစ်သူများနေ့တနင်္ဂနွေများအတွက် gumtrees ကြားတွင် snuggling ပါလိမ့်မည်သင်ကဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်။
5-ကြယ်ပွင့် setting ကိုအတွက် A-list ကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းသည် 2. ...
Qualia, Hamilton ကကျွန်း, Queensland ပြည်နယ်
ဘေးက၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်များကဝိုင်းသင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကကျွန်းကဲ့သို့ခံစားရအရာကိုသင်ချစ်တဦးတည်းမှ 5-ကြယ်ပွင့်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်နှိုးထမြင်ယောင်ကြည့် သန္တာပင်လယ်တွင် ။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးမ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, Qualia ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဇိမ်ခံ pavillions ပုဂ္ဂလိက sundecks, ရေကန်နှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၏တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ တက်ကြွစွာစုံတွဲအဘို့, အဲဒီမှာတစ်နေ့တာအတွင်းအလုပ်ရှုပ်သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန် snorkelling ခရီးစဉ်, ရဟတ်ယာဉ်စီး, bushwalks နှင့်ဂေါက်သီးဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံသင့်ရဲ့နှစ်သက်မယ့်ကုမ္ပဏီအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ။
စာရာသည်ဆောင်းရာသီ / Getty Images
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ spa ထွက်ပေါက်တွေ့ကြုံခံစားရန် 3. ...
အယ်လ် Questro, အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျ
ကြမ်းတမ်း, untamed ကျေးလက်ကျော်ကြမ်းပြင်-to-မျက်နှာကျက်ပြတင်းပေါက်များ, spa ဗတ်, ဇိမ်ခံပရိဘောဂများနှင့်အဆုံးမဲ့အမြင်များကောင်းတစ်ဦးအချိန်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အယ်လ် Questro 's Homestead နေရာထိုင်ခင်းသင်သည်အစဉ်အလိုပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးရှိပါတယ်!
အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျရဲ့ကြမ်းတမ်း Kimberly ဒေသကြီးအတွင်းတည်ရှိပြီးအဆိုပါ Homestead အယ်လ် Questro ရဲ့အများဆုံးဇိမ်ခံနေရာထိုင်ခင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Chamberlain တွင်ရှိသောပေါ်ကနေဆောက်ထားတဲ့, အ Homestead အားလုံးနှစ်ဖက်ကနေရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များအဖြစ်ကိန်းအောင်းရာ၏အရသာခံစားမှုရှိပါတယ်။ သငျသညျဘယ်နေရာမှာ၏အလယ်တွင်ရောက်နေနှင့်သင်စွန့်ခွာချင်ဘယ်တော့မှသော်လည်းသကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အဆုံးစွန်သြစတေး outback ထွက်ပြေးဖို့သည်4...
လောင်ဂျီတွဒ် 131, Uluru, မြောက်ပိုင်းနယ်မြေတွေကို
နှင့်ပွဲတစ်ပွဲအများဆုံးအထင်ကြီး - - သြစတြေးလျရဲ့အများဆုံးအထင်ကရတစျဦး၏အရိပ်၌အိပ်ပျော်ပါသလားအထင်ကရအဆောက်အယခုနှစ်အရှိဆုံးရင်ခုန်စရာနေ့ရက်ကိုဆင်နွှဲရန်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းကဲ့သို့မြည်?
သြစတြေးလျရဲ့ outback ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဇိမ်ခံလောင်ဂျီတွဒ် 131 ဧည့်သည်များမှကြော့, High-end ထမင်းစားခန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းပို့မစရိတ်ဓာတ်ကိုလည်းနှမြောတော်မူကြောင်းကိုစိတ်ကိုထားပါ။ သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့စခန်းချမှာဆောက်မယ်လို့ဘာမှထက်ပို plush နှင့်အဆင်ပြေနေသော၎င်းတို့၏ '' ရွက်ဖျင်တဲ '', plush ပရိဘောဂများနှင့်တကွရှင်ဘုရင်အရွယ်အိပ်ရာနှင့်ပြည့်စုံနေကြသည်။
တစ်နေ့တာအတွင်းနီးပါးဟာတိတ်ဆိတ်, ချောင်သဲကန္တာရထဲမှာကြယ်အောက်မှာညဥ့်အိပ်စက်မှုမှာနေစဉ်, သင်နှင့်သင့်သိသာသည်အခြားအလုပ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခရီးစဉ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအများအပြားရှိပါတယ်။
တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းလယ်ယာအိမ်သူအိမ်သား escapade သည် 5. ...
Quamby မူလစာမျက်နှာ, Westbury, Tasmania
အဘယ်အရာကိုလက်ရာမြောက်သောဥယျာဉ်မှရွေးချယ်ဖို့စပျစ်ရည်ကိုအပြည့်အဝမယ့်အိမ်အောက်ခန်းနှင့်အတူ, မြေယာဧကနှင့်ဧကပေါ်တွင်တစ်ဦးလယ်ယာအိမ်ထက်ငါ့ကိုပိုပြီးရင်ခုန်စရာတတျနိုငျသ? အဆိုပါလယ်တောအိမ်၌သင်တန်းဇိမ်ခံဆုတ်ခွာနေ, အသွင်ပြောင်းသောအခါ။
Quamby မူလစာမျက်နှာ, Tasmania အတွက် Launceston ထံမှသာမိနစ် 20, quaint နှင့်သေးလုံးဝခေတ်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မူလက 1829 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်နှင့်အင်္ဂလိပ်စတိုင်ဥယျာဉ်နှင့်လယ်မြေနှင့်အတူ 300 ဧကကျော်ပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားခြင်း, အိမ်ဂရုတစိုက်မူရင်း Homestead ၏ရငျးနှီးနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောခံစားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှေးခယျြသော, ခေတ်မီသောသက်သာခြင်းအကြောင်းများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းအောင်ပြည့်စုံစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
Quamby မူလစာမျက်နှာမှာတည်းခိုတစ်ခုမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည် Tasmanian စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးအိမ်အောက်ခန်းနှင့်အတူ, သငျသညျပင်ပြီးပြည့်စုံသော Valentine Day ကိုတနင်္ဂနွေများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစွန့်ခွာရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Tasmanian ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်စပျစ်ရည်, သငျသညျပင်ပြီးပြည့်စုံသော Valentine Day ကိုတနင်္ဂနွေများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစွန့်ခွာရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
6. အယ်လ်ပိုင်းလေထုထဲတွင်ပေါ်တွင်သင်၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများရရှိရန် ...
ပြာဇိမ်ခံကားနေထိုင်ရန်, ရေတံခွန် Creek အဘိဓါန်, ဗစ်တိုးရီးယား
လတ်ဆတ်တဲ့အယ်လ်ပိုင်းလေထုပေါင်းခေတ်မီပရိဘောဂ, လသာဆောင်ပေါ်မှာပုဂ္ဂလိက spa နှင့်ဝေးသဘာဝရှုခင်းနှင့်ညီမျှတဦးတည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ကူးယဉ်တနင်္ဂနွေ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များ။ မဲလ်ဘုန်းကနေဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ Alpine ဒေသအတွက် Hidden, 4-and တစ်နှစ်ခွဲနာရီ, အဝေးအလွန်အမှတ်ရစရာတနင်္ဂနွေ၏ထုတ်ထားတဲ့ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနှင့်အတူပြာဇိမ်ခံကားနေထိုင်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုကို 5-ကြယ်ပွင့်နေရာထိုင်ခင်း။
Valentine Day ကိုအဆိုပါကြမ်းတမ်းတောင်တို့, မြင်းစီးနင်းမှတဆင့်တောင်တက်, ဒါမှမဟုတ်ဖို့ chairlift စီးကနေ, သင်မိုဃ်းပွင့်တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးတွေ့မြင်နိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါ, ဒီ Valentine Day ကိုပြာမှာဆက်နေရန်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်, သြစတြေးလျနွေရာသီအတွင်းကျရောက်သော်လည်း မြင်ကွင်းကိုခံစားတောင်တော်နှင့်ရိုးရှင်းစွာရဲ့ထိပ်။
Penguins ကြည့်ရှုပါရန်သြစတြေးလျအတွက်7နေရာများ
တနင်္ဂနွေထွက်ပြေးဖို့: အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျအတွက်3Bliss Break များ
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံးသဲသောင်ပြင် 2018 ခုနှစ် Buy မှဥက္ကဋ္ဌ
Las Vegas မှာမင်္ဂလာနာရီ
တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ Set စာအုပ်များ
ဖီးနစ်အတွက် Kiss ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ
သည် Albuquerque ပူဖောင်း Fiesta
ထိပ်တန်း5အရှေ့မြောက်အမေရိကန်နိုင်ငံလမ်းမကြီးခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းများ
ဒေလီက Metro ရထားခရီးသွားအမြန်လမ်းညွှန်
စက်တင်ဘာလ Apple ကပွဲတော်များနှင့် Apple ပွဲများ
စန်း Gennaro Los Angeles မြို့အီတလီပွဲတော် 2016 ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ